Dheecaan gaduud ah iyo guduud ah ubaxa PNG
Dheecaan gaduud ah iyo guduud ah ubaxa PNG. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Tusaale ahaan sawir-biyoodka biyaha ...
Iris Purple Iris PNG Boorsada biyaha
Iris Purple Iris PNG Boorsada biyaha. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Dejinta sawir-biyoodka. Biyaha biyo ...
Orange iyo dhar guduudan PNG biyo dejiyeyaasha
Orange iyo mado guduud ah PNG dejiyaha dejiyaha Orange dufan iyo dhirta guduudan dhirta dhirta biyaha xannaanooyinka 29 ....
Xabbad dherer leh oo loo yaqaan PNG dejiyaha biyaha
Dareemo halis ah PNG dejiyaha dejiyeyaasha ah Dildilaaca dufcada qulqulka biyaha 67. Maqaal u ah DIY, casuumadaha arooska, ...
Blue Watercolor Irises PNG dhigay clipart of files 37. Maxaa gudaha ku jira: - png 8 faylasha, walxaha go'doonka ah, ...
Boorsooyinka biyo-biyoodka midab-badeedka PNG
Boorsooyinka biyo-biyoodka midab-badeedka PNG. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Dejinta sawir-biyoodka. Biyaha biyo ...
Cuntada dhalada ah ee cagaarka ah ee PNG
Boorsooyinka biyaha kulul ee jilicsan PNG clipartWatercolor ee xNUMX ubaxyada ubaxyada ubaxyada lagu sameeyo farsamada biyaha.
Iris. Kulan khafiif ah Png
Iris. Kulan khafiif ah oo loo yaqaan 'Watercolor png clip clip of 39 faylasha. Maxaa gudaha ku jira: - png 39 faylasha, walxaha go'doonka ah, ...
Dhalinyarad xitaa ubaxyo biyo ah PNG
Dhalinyarad xitaa ubaxyo biyo ah PNG. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Dejinta sawir-biyoodka. Biyaha biyo ...
Cagaaris buluug ah ubaxa PNG
Cagaaris buluug ah ubaxa PNG. Ubaxa dhirta ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Dejinta sawir-biyoodka. Biyaha biyo ...
Irises Purples Doolarka PNG biyaha
Irises Purples Doolarka PNG biyaha. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Dejinta sawir-biyoodka. Sawir-biyoodka ...
Boorsooyinka midabada leh ee ubaxa PNG
Boorsooyinka midabada leh ee ubaxa PNG. Ubaxa beeraha ubaxa ah. Caleemaha caleenta geedka ee geedka geedka gooni u goyn. Dejinta sawir-biyoodka. Biyaha biyo ...
Muujinaya: 1-12 37 ah
Neefsasho quruxda sawirada irid-biyoodka
Ubax macaan leh ayaa u qalma in ay kala istaagaan oo lagu daro ururinta gaarka ah. Sidaa daraadeed, waxaan soo ururinnay sawirrada biyaha ee iris ah ee quruxda badan ee irid ah ee kooxdan weyn! La shaqee ubaxyada waa geedi socod. Naqshadeeye kaasoo isticmaalaya sawirada iris png ayaa u baahan inuu ka warqabo calaamad qoto dheer. Dadku waxay aqbalaan calaamadaha qaar iyagoo aan ogeyn. Markaad siisid ubaxyo iris ah qof aad macnaheedu tahay inaad u sheegto iimaanka iyo xigmadda, macnaha isku midka ah ayaa loo gudbin karaa alaab la sameeyay sawirada iris png.
Wax walbaa kama fiicna dhaqanka hore. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa mid ku habboon in la isku daro waxqabadyo dhaqameed casri ah. Iris waa ubax hore oo leh noocyo kala duwan oo ah midabyo iyo qaabab cufan leh. Qaado ereyga Giriigga ah ee qaanso roobeedkii hore iyo isku xir laba bangi oo kala duwan oo dhaqameed iyo jaantus leh iyadoo la adeegsanayo dareen cusub. Kala duwanaanta sawirrada iridaha biyaha ee Iris waa sawir muuqaal ah oo ku saabsan fikradda casriga ah ee muhiimadda kala duwan ee bulshada adduunka. Waxaa intaa dheer, iris waxaa loo adeegsan karaa astaan ​​dhaqameed oo loogu talagalay dhalinyarada. Si qoto dheer u qodo magacyada noocyada. Maxay noqon kartaa badeeco badan oo loogu talagalay wax soo saarkaaga marka loo eego magaca aan caadiga ahayn ee madow irid madow oo loo yaqaan 'Dracula's Kiss'?
Noocyada iyo qaababka waa waxyaabaha muhiimka ah ee naqshadeynta. Ururkan jinsiga ee jinsiga ah wuxuu ka kooban yahay ubax lagu sawiray midabyo kala duwan iyo heerarka kala duwan ee nolosha. Waxay ka dhigan tahay inaad leedahay fursado badan oo ku saabsan fikradda naqshadeynta. By habka, tafaasiishooyin kale ee our iris ubaxyo bi'iyo biiga ku siinayaa badan oo xor ah ee naqshadeynta. Tusaale ahaan, sawirrada iris png waxaa laguugu soo bandhigayaa qaabab kala duwan, sidaas darteed waxaad awood u yeelan doontaa inaad sameysid sheygaaga. Muuqaalka ugu muhiimsan waa in ay yihiin sawirro muuqaal badan oo royalty ah oo aad u isticmaali kartaa isticmaalka ganacsiga iyo iibinta mass.
Quruxda ubaxa iyo awooddeeda inay ku daraan isugeynta qaab-dhismeed kasta waxaa si ballaaran loo isticmaalaa dhinacyo badan. Xaqiiji in sawirada biyo-irid ubaxa irid lagu arki doono sidoo kale shaashadda. Sawiradaan irridaha ah ee iris ayaa noqon doona mid ku habboon sawirada dhijitaalka ah. Ku dar jeebka, iibso oo ku raaxeyso habka!
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa qaybaha soo socda: Lavender png, peony png, kor u kacay png, png png, daisy png.